Flake Ice Machine, Tube Ice Muchina, Ice Muchina Kutengesa - Herbin Ice Systems
Izvi ndizvo zvazvino zvigadzirwa zvepamhepo zvine mabasa akazara uye vimbiso yemhando yepamusoro
Shenzhen Herbin Ice Systems Co, Ltd yakawanikwa muna 2006. Izvo zvave zvichitarisa mukuvandudza echina muchina tekinoroji kunyangwe kubvira, kusanganisira flake ice muchina, chubhu chando muchina, block ice muchina uye zvichingodaro.
2T flake chando muchina
Yangu yakajairwa 2T / zuva flake chando chirimwa chakashongedzwa ne500kg chando chekuchengetedza bin. Iyo ice bin inogona kuchengetedza mazana mashanu emvura echando. Mutengi anogona zvakare kusarudza hombe chando chengetedzo bhini, kana chando kamuri. Nekamuri hombe rechando, isu tinoshandisa simbi furemu kutsigira echando muchina, uye iyo simbi furemu inotakura huremu hwese hwechando muchina. Imba yechando iri pazasi pemuchina wechando. Mazaya echando anowira mukamuri yechando uye anochengetwa mukati akazara-otomatiki. Heano marongero ekudhirowa kuratidza yangu 2T / zuva flake chando muchina ne ...
3T flake chando muchina
Yangu yakajairwa 3T / zuva flake chando chirimwa chakashongedzerwa ne1500kg chando chekuchengetedza bin. Iyo ice bin inogona kuchengetedza 1500kgs yemazaya echando. Mutengi anogona zvakare kusarudza hombe chando chengetedzo bhini, kana chando kamuri. Imba yechando yakakura zvakakwana kuchengetedza ese echando maflakes akagadzirwa munguva yehusiku ne3T / zuva flake chando muchina. Tichashandisa simbi furemu kutsigira echando muchina, uye iyo simbi furemu inotakura huremu hwese hwechando muchina. Imba yechando iri pazasi pemuchina wechando. Mazaya echando anowira muchando chando uye anochengetwa
5T flake chando muchina
Yangu yakajairwa 5T / zuva flake chando chirimwa chakashongedzwa ne2500kg echando yekuchengetedza bin. Iyo ice bin inogona kuchengetedza 2500kgs echando mafuru. Imba yechando yakakura zvakakwana kuchengetedza ese echando maflakes akagadzirwa munguva yehusiku ne5T / zuva flake ice muchina. Mutengi anogona zvakare kusarudza makamuri makuru echando. Tichashandisa simbi furemu kutsigira echando muchina, uye iyo simbi furemu inotakura huremu hwese hwechando muchina. Imba yechando iri pazasi pemuchina wechando. Mazaya echando anowira mukamuri yechando uye anochengetwa mukati yakazara-automa ...
10T flake chando muchina
20T flake chando muchina
Yangu yakajairwa 20T / zuva flake chando chirimwa chakashongedzerwa ne10,000kg chando chekuchengetedza bin. Iyo ice bin inogona kuchengetedza zviuru gumi zvemakgs echando. Imba yechando yakakura zvakakwana kuchengetedza ese echando maflakes akagadzirwa munguva yehusiku ne20T / zuva flake ice muchina. Mutengi anogona zvakare kusarudza makamuri makuru echando. Tichashandisa simbi furemu kutsigira echando muchina, uye iyo simbi furemu inotakura huremu hwese hwechando muchina. Imba yechando iri pazasi pemuchina wechando. Mazaya echando anowira muchando chando uye anochengetwa mukati akazara -...
30T flake chando muchina
Yangu yakajairwa 30T / zuva flake chando chirimwa chakashongedzwa ne15,000kg echando yekuchengetedza bin. Iyo ice bin inogona kuchengetedza makirogiramu zviuru gumi nezvishanu zvemazaya echando. Imba yechando yakakura zvakakwana kuchengetedza ese echando maflakes akagadzirwa munguva yehusiku ne30T / zuva flake ice muchina. Mutengi anogona zvakare kusarudza makamuri makuru echando. Tichashandisa simbi furemu kutsigira echando muchina, uye iyo simbi furemu inotakura huremu hwese hwechando muchina. Imba yechando iri pazasi pemuchina wechando. Mazaya echando anowira muchando echando uye anochengetwa mukati akazara -...
5T / zuva flake chando muchina wekugadzira matani mashanu echando maflakes mazuva ese, mukati maawa makumi maviri nemana. Isu tinopa 5T / zuva flake chando muchina. Yakakwira mhando ine 2 gore garandi. Tinozvitsaurira kumagetsi echando michina kubvira 2009, uye michina yedu inovhara mazhinji emisika yeEuropean neAmerica. Tiri kutarisira kukushandira neyedu yakasimba uye inochengetedza simba-flake ice technology. 5T / zuva flake chando muchina wekugadzira matani mashanu echando maflakes mazuva ese, mukati maawa makumi maviri nemana. 1. Ice inogadzirwa neyedu 5T / zuva flake ic ...
PAMUSORO PEDU SALES NETWORK TAURA NESU CAREERS